Kani waa Apple TV cusub 4K (2021) | Wararka IPhone
Kani waa Apple TV-ga cusub ee 4K (2021)
Shirkadda Cupertino ayaa hubaal dib u cusbooneysiisay wax soo saarkii ugu cajiibka badnaa marka loo eego guriga ku xiran, Apple TV. Wax badan ayaa la sheegay bilo ku saabsan cusboonaysiinta in Apple TV 4K ayaa loo baahday, gaar ahaan baahida sii kordhaysa ee codsiyada sii kordhaya ee dalbanaya.
Apple wax badan ma tuugsaneynin waxayna soo bandhigtay cusbooneysiin yar oo Apple TV 4K ah oo leh astaamo cusub oo ay ugu mahadcelineyso qalabka dib loo cusbooneysiiyay. In kasta oo wax waliba jiraan, horumarintu waxay gebi ahaanba ku jirtay amarka cusub ee lagu xakameynayo iyo gaar ahaan awoodda waxyaabaha gudaha ku jira.
Si aad u bilawdid, qalabku wuxuu kori doonaa processor-ka cusub ee Apple A12 Bionic, isagoo ka tegaya Apple A10 oo horay u sii waday qaabkii hore. Kama aysan hadlin tiknoolajiyada loo yaqaan 'playback technology', maxaa yeelay waxay ku sii jirtaa Dolby Vision iyo 4K, iyada oo lagu shaqeynayo barnaamijka Apple Remote TV ee Apple kaas oo noo oggolaan doona inaan la jaanqaadno midabka la sii daayo si aan u siino waxa ay warshaduhu naga rabaan inaan aragno iyadoon loo eegin goobta maxalliga ah ee telefishankeenna. Tan aad baa loo qiimeeyaa, maxaa yeelay dejinta shaashadda dadka isticmaala badankood waxay ka tagtaa waxyaabo badan oo la doonayo.
Doorka hogaaminta waxaa loogu talagalay Siri Remote, taasi waxay hada heshay isbadal kicin doona dhowr su'aalood oo ku saabsan. Waxaan leenahay giraangir taabasho ah xagga sare oo inbadan ama ka yar isla badhamada ayaa la hayaa. Kontaroolaha ayaa hadda leh waxoogaa qaro adag oo bir ah marka loo eego Siri Remote iyo badhanka Siri wuxuu u dhaqaaqi doonaa dhinaca koontaroolaha, isagoo luminaya inta badan iftiinka, sidaas darteed waxaan fahamsanahay in Apple uu bilaabay inuu ka tanaasulo dagaalka kaaliyaha gacantiisa. Apple TV 4K (2021) waa la keydin karaa Jimcaha, Abriil 23 waxaana la bilaabi doonaa in la keeno Maajo, € 189 ee nooca 32GB ah iyo € 229 ee nooca 64GB.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Kani waa Apple TV-ga cusub ee 4K (2021)
IPad-ka cusub wuxuu la yimid muuqaalo "Pro" kala duwan oo run ah
Apple waxay soo bandhigeysaa iMac cusub oo leh M1 Chip